“Waan ku faraxsanahay soo laabashada Zidane, sababtoo ah kubadda cagta ayaa u baahnayd isaga” – Hazard – Gool FM
“Waan ku faraxsanahay soo laabashada Zidane, sababtoo ah kubadda cagta ayaa u baahnayd isaga” – Hazard
(Yurub) 12 Abriil 2019. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa u sheegay Radio “Monte Carlo” ee dalka Farance inuu si weyn ugu faraxsan yahay dib ugu soo laabashada Zinedine Zidane ee tababarka kooxda Real Madrid.
Laakiin xidiga reer Belgian ayaa ka fogaaday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea, maadaama loola xiriirinayo ku biirista kooxda Real Madrid.
“Ma ahi ciyaaryahan u ciyaara kooxda Real Madrid, laakiin maadaama aan taageero Zinedine Zidane, aad ayaan ugu faraxsanahay inuu ku soo laabtay Los Blancos, sababtoo ah kubadda cagta ayaa u baahnayd isaga”.
“Waa war aad u wanaagsan, inkastoo aysan u fiicneyn kooxaha kale, sababtoo ah Real Madrid iyo Zidane oo mideysan waxay gaarayaan guulo badan, sidaasi darteed waxay ku noqon doontaa dhibaato xoogan kooxaha kale”.
“Mustaqbalkeyga ma ahan wax aan doonayo inaan ka hadlo hadda, weli waxaan heysanaa bil oo aan si wada jir ah u dagaalami karno kooxda Chelsea, waxaana fiicnaan laheyd hadii aan ku wada guuleysaneyno tartanka Europa League, islamarkaana aan u soo baxno Champions League, sanadka soo aadan, waxay ku xiran tahay inaan sameyno wax walba, waana arki doonaa waxa dhaca intaas kadib”.
Si kastaba dhawaan warbaahinta Spanish-ka ah ayaa waxay sheegeen in wadahadalada u dhexeeya Hazard iyo Real Madrid uu noqon doono mid laga miro dhaliyo ee xaqiiqo ah, isla markaana uu haatan kaga dhow yahay xili kasta ee lasoo dhaafay, maadaama lagu sii dhawaanayo in si rasmi ah loo go’aamiyo heshiiskan.
Inakastoo ay maamulka kooxda Chelsea ay doonayaan in Hazard ay ku fasaxaan qiimo dhan £ 100 million, waloow halsano oo kaliya uu ka harsan yahay dhamaadka heshiiska uu ku joogo Stamford Bridge, hadana sida uu qoray wargeyska Chelsea waxay aqbali karta dalabka ah 80 ama 90 milyan ginni.